Abavukuzi baphoqwa ukuba bathwale izidumbu zozakwabo bayozilahla | News24
Abavukuzi baphoqwa ukuba bathwale izidumbu zozakwabo bayozilahla
Johannesburg - U-Abel Abugalo, ongomunye wabavukuza ngokungemthetho, uchaza ngendlela abaphoqwa ngayo ukuba bathathe izidumbu zozakwabo abadutshulwa babulawa ngasekuqaleni kwenyanga ephezulu eBenoni‚ ngaseGoli.
Abavukuzi abangekho emthethweni babulawa esigamekweni okusolakala ukuthi sihlobene nombango wabavukuzi abangekho emthethweni abanonogada abazimele.
“Babephethe izibhamu besiphoqa ukuba sithwale izidumbu ngoba bengafuni ukuba amaphoyisa afike emigodini yabo, ngoba ayezokwazi ukuthi ziqhamuke kephi,” kusho u-Abugalo.
Kunempi eshubile phakathi kwamaZulu nabeSuthu njengoba kubangwa imigodi yezimayini.
U-Abugalo uthe yena kanye nethimba lakhe babeya emayini yaseVan Ryn bahlangana nonogada babeSuthu. Ngesikhathi sebengasemgodini, bezwa ukuqhuma kwesibhamu, bacasha phakathi kwaze kwasa.
OLUNYE UDABA: UMengameli uqoke ibhodi lesikhashana lakwa-SABC
Uthi ngesikhathi sebevela onogada bafuna ukuba babakhokhele ukuze babavikele.
“Basitshela ukuthi asingene emgodini ebebewugadile sithathe izidumbu. Sathola abantu abayisithupha beshonile, sabakhipha emgodini, basiphoqa besikhombe ngezibhamu ukuba sizithwale siyozibeka kujantshi,” kusho u-Abugalo.
Uthe uma kufa abantu abavukuza ngokungemthetho, bayakhishwa emigodini bayobekwa eduzane komgwaqo.
Kuthiwa babhala imininingwane yemindeni engalweni yezisulu.